नयाँ रुपमा आफ्नो व्यवसाय कसरी प्रस्तुत गर्ने ? द क्रष्टबाट सिकौं !  HamroKatha
नयाँ रुपमा आफ्नो व्यवसाय कसरी प्रस्तुत गर्ने ? द क्रष्टबाट सिकौं !
व्यवसायका गर्न बानेश्वर नै किन ? तर उनले यो लोकेशन यतिकै छानेका भने होईन । धेरै अध्ययन पछि मात्र यो लोकेशन फाईनल गरेका हुन । अरुले अफलोकेशन देखेको त्यहि ठाउँमा उनले भने व्यवसायको अपार सम्भावना ठम्याए ।
हाम्रो कथा २०७५ माघ ५ गते १६:४०
विदेश जानु पनि आफैमा नराम्रो रहेनछ । पछिल्लो समय विदेश जाने र उद्यमशीलताको सिप सिकेर नेपालमै उद्यम गर्नेहरुको संङख्या बढ्दो छ । उच्च शिक्षा संगै सिप र जाँगर पनि लिएर नेपाल फर्किएका छन् ।
बानेश्वर क्षेत्रमा धेरै रेष्टुरेन्ट र खाजा घर रहेको छन । तर त्यहि भिडमा द क्रष्ट रेष्टुरेन्टले भने आफ्नो भिन्नै पहिचान बनाएको छ । पिज्जा, मःम लगायतका खानाका पारखीहरुको ध्यान तानेको छ । भिन्न स्वाद र स्वरुपमा पाईने खाजा ग्राहकको रोजाईमा परेको छ ।
द क्रष्टका संस्थापक साकार शर्माले बताउनुभयो, “सुरुमा मैले म: म: राखेको थिईन। तर, ग्राहकको डिमाण्ड म:म: भए पछि राख्न थालेको हो । नेवारी खाजाका लागि पिज्जामा पनि नयाँ दिऔ । रोलमा दिऔ । नेवाः पिज्जा नयाँ गरीरहेका छौ ।”
आज ग्यास र बिजुलीबाट खाना तयार गर्ने यो जमानामा पनि यहाँ भने यसै गरी दाउरा प्रयोग गरेर विभिन्न खानाका परिकार बनाईन्छ । यसको विशेषता पनि यहि हो ।
ग्राहकलाई भिन्न स्वादमा खाना चखाएर व्यवसायीक सफलताको सिढि चढ्दै गरेको द क्रस्टका संस्थापक तथा संचालक हुन साकार शर्मा । साकार तिनै व्यक्ति हुन जो ९ वर्ष अघि ७ वर्षे अमेरिकाको बसाई र त्यहाँको जागिरलाई विट मार्दै नेपाल फर्किएका थिए । उनी अमेरिकाअध्ययनका क्रममा गएका हुन । त्यसै क्रममा उनले अमेरिकामा क्याटरीङमा काम गरेका थिए । त्यहि सिकेको ज्ञान र सिपको उपयोग गर्दै उनले मज्जाले व्यवसाय चलाएका छन ।
साकार शर्माले थप भन्नुभयो, “अमेरिका बस्दा म रेस्टुरेन्ट, क्याफेटेरीयामा काम गरे। त्यहाँ धेरै सिके। म सहायक संचालकको भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थामा पुगी गरेको थिएँ। त्यसरी त्यहाँ मेरो राम्रो फाउन्डेसन बन्यो। उताको एक्सपोजरले निकै सहयोग पुर्यायो।”
हुन त साकारले नेपाल फर्किए लगतै व्यवसाय सुरु गरेकाभने होईनन । नेपाल फर्किए पछि एउटा बैंकमा जागिर गरेछन । तर विस्तारै उनलाई आफै केहि काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लागेछ । उनले बैंकको जागिर छाडेछन ।
बैंकको जागिर छाडे भन्दा , साकारलाई परिवारमा भन्दै थिए, “नेपाल हो । यहाँ गर्न सोचे जस्तो सजिलो छैन । दुःख पाउछस् ।”
तर नेपालमै केहि गर्न भनेर अमेरिकाबाट फर्किएका साकारले यति मात्र सोचे ‘केहि गर्ने हो’ ।
साकार व्यक्त गर्नु हुन्छ, “एकै दिनमा आफ्नो गन्तव्यसम्म पुगिन्छ भन्ने हुदैन। दरो प्रतिवद्धता र टीम चाहिन्छ। मलाई थाहा थियो कि अतिथि सत्कारको क्षेत्रमा के कस्ता कम गर्न सकिन्छ। मैले त्यहि पहिचान गरी आफुलाई पुल बनाउने काम गरेको हुँ।”
सुरुमा साथीहरु संग मिलेर केहि काम अघि बढाए । तर यसमा पनिउ नको त्यति मन बस्न सकेन । र आफैले ३ वर्ष अघि १ करोड रुपैयाँको लगानीमा सुरु गरे द क्रष्ट रेष्टुरेन्ट ।
धेरैको प्रश्न थियो , व्यवसायका लागि गर्न बानेश्वर नै किन ? तर उनले यो लोकेशन यतिकै छानेका भने होईन । धेरै अध्ययन पछि मात्र यो लोकेशन फाईनल गरेका हुन । अरुले अफलोकेशन देखेको त्यहि ठाउँमा उनले भने व्यवसायको अपार सम्भावना ठम्याए ।
साकार शर्माले बताउनुभयो, “बानेश्वरमा धेरै स्कुल, कलेजहरु छन्। यहिका स्थानीय पनि ठमेल तिर खाजा खान जान्छन। उनीहरुको आवश्यकता यहि बानेश्वरमै पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने सोच आयो।”
उनको यो रेष्टुरेन्ट पिज्जा र कफि पारखीका लागि लक्षित गरेर खोलिएको हो । तर उनले आफुले बनाउने यिनै खानाकोे स्वाद भने भिन्न रुपमा प्रस्तुत गरेका छन । एकै प्रकारको खानामा पनि भिन्न टेष्ट दिएर उनले मज्जाले व्यवसाय गरीरहेका छन ।
साकार शर्माले मुल्य निर्धारणबारे बताउनुभयो, “हाम्रो भनेको सामान्य सरदार स्तरको प्राईस हो। कम्तिमा हामीसँग मफिन छ पचास रुपैया पर्ने। अनि पाँच जनाको समुह आयो भने सबै लाई पुग्ने प्याटर हजार देखी पन्ध्र सयमा आउँछ। जनमा सबै भेज, नोन भेज तथा ड्रिक्सहरु सबै आउछन।”
साकार शर्माले ग्राहकको ध्यानलाई ख्याल गरी आफुले तयार गर्ने खाना र पैसाको सामन्जस्यता पनि मिलाएका छन ।
साकार शर्माले अहिले २५ जनालाई रोजगारी दिईरहेका छन । उनकोको अवको सपना अन्य स्थानमा पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउने रहेको छ । काठमाण्डौ बाहेक देशका विभिन्न स्थानमा क्रष्टलाई पुर्याउन लागि परेका छन । रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा अपार सम्भावना देख्ने साकारले यो क्षेत्रमाअरुलाई भने यसरी सम्भावना देखाउछन ।
डिमाण्ड वानेश्वरमा साथै अन्य स्थानमा पनि हुन्छ । नयाँ ईनोभेसन जहिले पनि हुन्छ नै । ग्राहकलाई पनि नयाँ हुने र एउटा कुरा चलेन भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन । स्थानिय चाहनालाई ध्यान दिने हो भने पक्कै चल्छ ।
साकारले आफ्नो उपज वृद्धि तथा भविष्यका योजना बारे भन्नुभयो, “ वृद्धि भईरहेको छ। अघि बढिरहेको छौँ। अहिले पनि बुटवलमा पनि चलिरहेकै छ। अब क्रष्ट हेटौडा जादै छ। हामीले इटहरी, बिराटनगर पनि पुर्याउने योजनामा काम गर्दै छौँ। ईनोवेसनमा लागी जति पनि ठाउँ वा बजार छ।”
कुनै पनि व्यापार व्यवसाय अरु कसैले गरीसकेको छ । आफुले अब के गर्ने भनेर पछि पर्नुपर्ने अवस्था रहदैन ।काम गर्नेहरु भन्छन, यि क्षेत्रमा सम्भावना नै सम्भावना छ । तर त्यसलाई भिन्न रुपमाआफूले कसरी प्रस्तुत गर्न सक्ने ?त्यसले भने ठूलो महत्व राख्छ ।